Inona no tokony hojerentsika rehefa mividy milina fanapoahana tifitra - News - Qingdao Puhua Heavy Industrial Machinary Co., Ltd.
an-trano > NEWS > Vaovao momba ny indostria
Inona no tokony hojerentsika rehefa mividy milina fanapoahana tifitra
1. Mividiana milina fanapoahana tifitra mety amin'ny filanao fanodinana. Betsaka ny famaritana ny milina fanapoahana tifitra, toy ny karazana hook, amin'ny alàlan'ny karazana, ny karazana crawler, sns. Mba hahitana ny filanao fanodinana manokana dia manondro ny karazana masinina fipoahana fitifirana mety amin'ny fanadiovana ilay fitaovana. Ny ampahany lehibe amin'ny rafitra vy dia tokony diovina amin'ny alàlan'ny milina fanapoahana tifitra, ary ny faritra kely amin'ny fitaovana dia azo diovina amin'ny milina fanapoahana karazana crawler. Ny mpanjifa dia tokony hanome ny haben'ny asa fanadiovana isan'andro Misafidiana milina fanapoahana tifitra mety.
2. Noho ny tsy fahazoana antoka ny vidin'ny milina fanapoahana tifitra, taorian'ny fampandrosoana efa an-taonany maro, ny fitaovana fitifirana fitifirana ankapobeny dia namorona vidiny mitambatra. Ny fahasamihafana eo amin'ny fividianana sy ny fividianan'ny mpanjifa dia tsy lehibe, fa ny kalitaon'ny vokatra kosa dia tokony hohamafisina aloha.
Ho an'ny fitaovana fanapoahana tifitra tsy mahazatra dia misy antony maro tsy azo antoka toy ny isan'ny blasters voatifitra, ny habetsahan'ny rivotra manala vovoka, ary ny haben'ny efitrano, noho izany ny vidiny dia tsy mitambatra.
3. Ny kalitaon'ny vokatra, ny kalitaon'ny vokatra azo avy amin'ny masinina dia mahatakatra ireto lafiny manaraka ireto: (1) ny kalitaon'ny akora, toy ny hatevin'ny takelaka vy, (2) fizotran'ny famokarana, (3) fitifirana fanadiovana tifitra, izay mety ho tena intuitive eny an-tsaha mba hahita, rehefa mividy ny mpanjifa, dia afaka mijery ny fizotran'ny fanadiovana ny milina fanapoahana tifitra eny an-toerana izy ireo mba hahitana ny endrik'ilay fitaovana nodiovina.
Teo aloha:Fanaraha-maso alohan'ny fandidiana ny milina fanapoahana tifitra
Manaraka:Inona no fantatrao momba ny milina famaohana tifitra hook